ဘင်္ဂါလီက်ို မျက်နှာလိုက်ပြီးပြောနေသူတွေသိစေချင်ပါတယ် ~ Myanmar Express
Fraom: မင်းကိုအောင်ကျွန်တော်သင်္ဘောပေါ်မှာ အင်ဒိုနီရှား၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊ ပြည်ကြီတရုတ် သင်္ဘောသားတွေပါတယ်။ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂါလီတွေ စပြီးအကြမ်းဖက်တဲ့နေ့က ကျွန်တော် facebook မှာဒီနေ့ မြတ်စွာဘုရား တရားတွေပဲရှယ်မယ် ဖတ်မယ်ဆိုပြီး မနက်ပိုင်းရှယ်တယ်၊ အကိုတစ်ယောက်က တစ်သောင်းတန်ငွေ ကိစ္စကို tag ပေးတာတောင် remove လုပ်လိုက်တယ်။ညနေစောင်း အိပ်ရာနိုးချိန်မှာ အင်ဒိုနီရှား သင်္ဘောသားတစ်ယောက်က မင်းတို့စီမှာ ပြဿနာ တက်နေတယ်လို့ပြောတယ် ငါမသိသေးဘူးဆိုပြီး facebook ဖွင့်ကြည့်တော့ မှသတင်းတွေက ပလူပျံနေပြီ အင်ဒိုနီရှားသင်္ဘောသားတွေကို ပြန်ရှင်းပြရတယ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာ ချနေတာမဟုတ်ဘူး ဘင်္ဂါလီတွေက ငါတို့မြေပေါ်ကျူးကျော်ပြီး နယ်မြေလု အကြမ်းဖက်နေတာလို့ရှင်းပြရတယ်။ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြတာက အယ်ကိုင်ဒါနဲ့ ဗမားယူရိုစီကငွေထောက်ပံ့မူရအောင် လုပ်နေတာဆိုပြီး၊ ဟန်ညောင်ရွှေတို့(B-UK) ငွေတောင်းကောင်းအောင်လုပ်နေပုံတွေကိုပြပြီး သူတို့ကို ရှင်းပြရတယ်။မင်းတို့မြန်မာမှာ နိုင်ငံသားကတ်တွေမလုပ်ထားဘူးလား အဲဒီကတ်နဲ့ အ၀င်အထွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောတယ်၊ ကိုယ်နိုင်ငံက လ၀က နဲ့ နစကတွေ့ ငွေကိုးကွယ်ပုံကိုရှင်းပြလိုက်တော့မှ သူတို့သဘောပေါက်သွားတယ်၊၊စူဟာတိုလက်ထက်ကို ကောင်းကောင်းခံစားခဲ့ရသူတွေဆိုတော့ သူတို့ကတောင်ကိုယ့်မြန်မာတွေကို ပြန်သနားပြီး မင်းတို့တွေ အဲဒီလို့ဖြစ်နေရင်တော့ မလွယ်ဘူးတဲ့၊ ဘင်္ဂါလီတွေဟာ အရမ်းယုတ်ညံ့တဲ့ စိတ်ထားရှိတယ်ပြောကြတယ်။ ငါတို့ကဘာသာတူခြင်း မင်းတို့ထက်ပိုသိတယ်လို့တောင်ပြောလိုက်သေးတယ်။မလေးရှား ပို့ကလမ်(လ်) ဆိပ်ကမ်းရောက်တော့ ထမင်းစားနားချိန်မှာ မလေးအဖိုးကြီးနဲ့ စကားပြောဖြစ်တယ် ဘေးပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတွေအကြောင်း ပြောနေကြရင်း ဘင်္ဂါလီတွေအကြောင်းရောက်တော့ မလေးအဖိုးကြီးက အဲဒီကောင်တွေမကောင်းဘူး ငါတို့စီကို တရားဝင်လာတယ်၊ ခိုးဝင်တယ် မလေးမတွေနဲ့ရှုပ်ပြီး ကလေးရတယ်လို့သိတာနဲ့ ဘင်္ဂါလီကိုချက်ချင်းမောင်းထုတ်တယ်လို့ပြောတယ် ကလေးကိုတော့နေခွင့်ပေးတယ် နိုင်ငံသားခံယူခွင့် မပေးဘူးလို့ပြောတယ်၊ မင်းတို့တွေက နယ်မြေခြင်းထိစပ်နေတော့ သတိထားပါတဲ့၊ ငါတို့ဘာသာတူတွေထဲမှာ ဘင်္ဂါလီတွေက အဆင့်အနိမ့်ဆုံး စိတ်ထားအညံ့ဆုံးလို့ပြောကြတယ်။ကိုတာကင်နာဘာလူး-kota kinabalu(ကိုတာကင်နာဘာလူးတောင်ရှိတဲ့မြို့ )ဘောနီယိုကျွန်းမကြီးပေါ်မှာရှိတယ် ဘရူးနိုင် နိုင်ငံဘေး မလေးရှားပိုင်တယ် အဲဒီကိုရောက်တော့လည်း ဘင်္ဂါလီတွေကို မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ပဲပေးတာ သူတို့မလေးအချင်းချင်းမှာတောင် ကွာလာလမ်ပူကို မာဖီးရားမြို့ တော် လူရှုပ်တွေများတဲ့မြို့ တော်လို့ပြောကြတယ်။ (မလေးကို အပမ်းပြေခရီးထွက်ရင် ကိုတာကင်နာဘာလူးမြို့ ကိုသွားစေချင်ပါတယ် စင်ကာပူလို့ပဲ)ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တော့ မြန်မာတရားမ၀င်အလုပ်သမားတွေ အများကြီးရှိပေမဲ့ ပြဿနာ မဖြစ်ကြောင်း ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)တွေက ခိုးလည်းဝင်သေး ပြဿနာလည်းရှာကြောင်း အခုသူတို့ထိုင်းတောင်ပိုင်းမှာ လည်း ဒီလိုဘာသာရေးနဲ့ ရောထွေးပြီး ပြဿနာခဏခဏရှာ ခွဲထွက်ရေးတောင်းနေလို့ အသေအပျောက်တွေများတဲ့ အကြောင်းပြောသွားတယ်။ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)နဲ့ပတ်သက်ပြီ ကျွန်တော်ကောင်းတာ သိပ်ပြီးမကြားဘူးဖူးမြန်မာမြေမှာမွေး မြန်မာမှာပညာသင်ပြီး ငွေမျက်နှာကြောင့် ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ) ဘက်ကလိုက်ပြီး တိုင်းပြည်ကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့ မရောင်းစားပါနဲ့လို့ အသိပေးလိုက်ပါတယ်....ဘင်္ဂါလီ(ရိုဟင်ဂျာ)နဲ့ ပြည်တွင်းနေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို ရောထွေးပြီးရှုပ်ထွေးအောင် မလုပ်ပါနဲလို့အသိပေးလိုက်ပါတယ်....Myanmar Express
Posted in: ထူးဆန်းသော အတိုက်အခံများ,သတင်း,မြန်မာ-ကုလား အဓိကရုဏ်းများ
12 June 2012 12:36
မှန်ပါတယ်။ဘင်္ဂါလီတွေနှင့် ဘင်္ဂါလီထောက်ခံသူတွေကို နိုင်ငံထဲကမောင်းထုတ်ရမယ်။။။။
မင်းတို့တွေက နယ်မြေခြင်းထိစပ်နေတော့ သတိထားပါတဲ့၊ ငါတို့ဘာသာတူတွေထဲမှာ ဘင်္ဂါလီတွေက အဆင့်အနိမ့်ဆုံး စိတ်ထားအညံ့ဆုံးလို့ပြောကြတယ်။
13 June 2012 03:26
This article author is right. Myanmar President U Thein Sein and NLD party leader Aung San Su Kyi must do step by step . ( 1) Must do Press conference and tell all Myanmar people and UK, USA and World governments and world media that Rohingya is not Myanmar ethnic and Myanmar Nationality forever . If so, Rohingya and World can't colonize Rakhine state and Myanmar.(2) Current Myanmar President U Thein Sein and NLD leader Aung San Su Kyi issue leagal statement that Rohingya is not Myanmar Ethnic and Myanmar Nationality. (3) Then deport all illegal 700,000 Rohingya Muslims and Muslims from Rakhine state and Myanmar. (4 ) Then Establish good economy in Northern Rakhine state ( Bangladesh -Myanmar border ) and organize millions of Myanmar migrate to Northern Rakhine and Rakhine state. If so Myanmar and Rakhine people will be majority in Northern Rakhine and Rakhine state.